Siem Reap nabatara ndị njem nlegharị anya Biz Fair
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Siem Reap nabatara ndị njem nlegharị anya Biz Fair
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kambodia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ihe karịrị ụlọ ọrụ 70 Kambodia na mba ụwa esonyela ụbọchị mmeghe nke Biz Fair, nke bidoro na Siem Reap.
Ihe karịrị ụlọ ọrụ 70 Kambodia na mba ụwa abanyela ụbọchị mmeghe nke Biz Fair, nke bidoro Siem Reap.
Ihe ngosi - nke a na-eme n’afọ a maka oge mbụ - a ga-eme ya n’izu a na Phnom Penh.
Ọ na-achọ ịmepụta ọwa ahịa ndị ọzọ maka ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ ndị njem na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị njem na Cambodia mụbaa n'oge oge dị ala, ndị nhazi kwuru.
Thourn Sinan, onye isi oche nke Cambodia Isi nke Pacific Asia Travel Association, kwuru na ihe omume na Siem Reap, nke ga-aga n'ihu taa, dọtara ụlọ ọrụ mba ụwa 40 si mba 9: Bangladesh, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, China, Singapore, na India.
"Ebumnuche bụ isi nke ihe omume ndị a bụ ịkwalite nkwado azụmahịa na ịkparịta ụka n'etiti ụlọ ọrụ Cambodian na ụlọ ọrụ dị na Asean na akụkụ ndị ọzọ nke Asia Pacific ka ha wee nwee ike tolite ọnụ ma nweta uto na-adigide," Mr Sinan kwuru
"Ihe omume ndị a na-enyekwa ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ ohere inyocha Cambodia ma soro ndị egwuregwu obodo nwee mmekọrịta nke nwere ike inyere ha aka ịkwalite ahịa," ka ọ gbakwụnyere.
“N’afọ a, a ga-eme ihe ngosi ahụ ugboro abụọ, otu na Phnom Penh na otu na Siem Reap. Ma, maka afọ na-abịa, anyị na-eme atụmatụ ịme ngosi anọ - abụọ na obodo ọ bụla, ”ka Mr Sinan kwukwara.
O kwuru na ọ bụrụ na enwere nkwado zuru oke site na ndị na-enye ọrụ mpaghara, a ga-agbasawanye ahịa ahụ na mpaghara ndị ọzọ na mba ahụ, na-amalite na Battambang, ụsọ oké osimiri na mpaghara ọwụwa anyanwụ.
Pak Sokhom, onye ode akwukwo nke State na Ministry of Tourism, kwuru na ụbọchị mbụ nke Biz Fair bụ ihe ịga nke ọma, ma kwuo na ya nwere olile anya na a ga-eme mmemme a kwa oge.
Mr Sokhom kwuru, "Achọrọ m ikele ndị Pacific Travel Travel Association maka ịnabata Siem Reap nke mbụ Biz Fair, m ga-arịọkwa ha ka ha mee mmemme a kwa afọ n'ihi na ọ bụ ebe dị mma iji kwalite onyinye ndị njem Cambodia," Mr Sokhom kwuru
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 5.6 na-eme njem nlegharị anya bịara n’alaeze ahụ n’afọ gara aga, ihe ruru pasent 11.8 karịa nke afọ 2016. Ndị ọbịa nde 4.3 si Asia Pacific.
Na 2017, mpaghara ndị njem na-enweta pasent 13 nke GDP mba, na-ewepụta ijeri $ 3.4 na ego ha nwetara, ma mepụta ọrụ 620,000 kpọmkwem, dị ka Ministry of Tourism kwuru.
A na-eme Biz Fair na Siem Reap na Septemba 3-4 na Phnom Penh na Septemba 5-6.